maviri maapuro airpods max mavara ari kutengeswa pamutengo wakaderera kupfuura nakare kose
Kuru Nhau & Ongororo Maviri Apple AirPods Max mavara ari kutengeswa pamutengo wakaderera kupfuura nakare kose
Maviri Apple AirPods Max mavara ari kutengeswa pamutengo wakaderera kupfuura nakare kose
Izvo & apos; zvakaoma kukurudzira iyo $ 550 AirPods Max apo akawanda eiyo akanakisa epamusoro-magumo maBlue Bluetooth mahedhifoni zviripo nhasi zvinowanzo mutengo pamazana anoverengeka madhora mashoma, asi kugona kuveura $ 50 kubva paMSRP yeApple & apos; s yekutanga-ever premium pa-nzeve magaba inoshandura iyo equation ... zvishoma.
Zviripachena, kuderedzwa kwepfumbamwe muzana hakuiti zvekutengeserana, asi zvitende kana kwete, vakomana vakaipa ava havana kumbobvira vatengesa iyi 'yakachipa' kare. Zvekutengesa zvakaburitswa pamwedzi mitanhatu yapfuura , nhengo hombe uye inonakidza kwazvo ye yakabudirira kwazvo AirPods mhuri yakange yakamisikidzwa kare isingasvike makumi matatu emari.
Tora iyo AirPods Max pane yavo yepamusoro yakambodzikiswa
Kunge chibvumirano chine mwero kubva kumavhiki mashoma kumashure , ichi chinopihwa chinomanikidza chinobva kuAmazon isina tambo dzakabatanidzwa uye hapana chakakosha chero mhando. Nehurombo, iwe hauna & apos; hautore yakawanda chromatic sarudzo panguva ino kutenderedza, sezvo sirivheri nedenga rebhuruu zvinwiwa ndizvo chete zviri kutora madhora makumi mashanu zvakaderera pane zvakajairika izvozvi.
Huru dzegirini nepingi, panguva iyi, zviripo parizvino pazvishoma zvisingakoshi zvemadhora mapfumbamwe uye madhora matanhatu zvakateerana, nenzvimbo yegrey vhezheni ichidhura zvakanyanya senguva dzose.
Ehe, zvechokwadi hardcore Apple vateveri vari kutsvaga kuwedzera kune kwavo kuunganidzwa kwe 'iDevices' uye 'maAccessories' havafanirwe kubhadhara pfungwa zhinji ku ... marii yavanotofanira kubhadhara kukambani yavo yavanoda & apos; s dzinotarisirwa dzimwe nzira kune dzinodiwa dzeBose 700 uye Sony WH-1000XM4 .
Aya maAirPod maMax mavara zvakare anokwezva
Kufanana nevakwikwidzi vavo vepamusoro, iyo AirPods Max inouya neese-ye-iyo-iyo-inoshingairira kudzima ruzha tekinoroji uye premium yakazara yeodhiyo mhando, pamwe neiyo stellar bhatiri hupenyu hunosvika kumakumi maviri maawa enguva isingamedzwe yekuteerera nguva pakati pemitero.
Kuwedzera kune zvakasikwa zvikanganiso zvakasimbiswa mune kwedu-kwakadzika AirPods Max ongororo kumashure muna Ndira, ungangoda kufunga nezveAmazon & apos; s inokurumidza kusvika Prime Zuva 2021 festival, panguva yatinotarisira kuona akawanda maBluetooth makuru mahedhifoni anobata yakapihwa, isati yakurumidza kudhonza chikungiso.
Zvakare zvakare, hapana vimbiso yekuti iyo AirPods Max ichave yakachipa 21 na22 Chikumi , uye nekuziva Apple, isu hatidi kushamisika kana izvozvo zvisingaiti zvachose.
ipad mweya wechina kuburitsa zuva
samsung galaxy s7 nhema yechishanu madhiri
Google inogadziridza Google app neiyo nzira pfupi yeiyo Chrome incognito modhi
Apple iPhone XS, XS Max uye iPhone XR mitengo uye mazuva ekuburitsa
Dzimwe dzakanakisa maBose mahedhifoni uye mahedhiyo anotenderera ari kutengeswa pamitengo inopenga
Vashandisi veApple vanogona kugadzirisazve Spotify playlists kuburikidza neapp